I-50 eyenzelwe kakuhle i-infographics | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Akukho lula ukucacisa malunga nokuba yintoni i-infographic, kodwa makhe sijonge ukuba singacacisa lo mbandela kancinane:
La ngezantsi Ngumboniso obonakalayo ngakumbi kunombhalo ngokwawo, apho inkcazo, iingcaciso okanye ukutolikwa kungenelela, kuboniswe ngendlela yemifanekiso eqhelekileyo, enokuthi okanye ingangqinelani nemizobo engabonakaliyo kunye / okanye izandi. I-infographics yazalwa njengesixhobo sokuhambisa ulwazi ngokuzoba. Iimephu, iitshathi, iibhulethi, njl. Ziyi-infograms, oko kukuthi, iiyunithi ezincinci ze-infographics, apho kunikwa ulwazi olupheleleyo, nangona kunokuba luncediso okanye luyenziwe.
Eli gama liye lathandwa ukubhekisela kubo bonke abo imifanekiso eyenziwe ngekhompyutha. Ngokukodwa, ihlala ibhekisa ekudalweni kwemifanekiso ethi izame ukuxelisa umhlaba onemilinganiselo emithathu ngokubala indlela yokuziphatha kokukhanya, ivolumu, umoya ojikelezayo, izithunzi, imibala, ikhamera, intshukumo, njl.
Nje ukuba esi sibhalo siqondwe, ndicinga ukuba sicace gca, kwaye xa sele sizibonile zonke ii-infographics ezivela kubo abafana HongKiat emva kokutsiba ndicinga njalo nam. Enkulu.
Iminyaka engama-50 yokuKhangela emajukujukwini. I-infograph enkulu ebonisa iminyaka engama-50 yokugqibela yokuhlola indawo. Le infographic engummangaliso yenziwe nguSean McNaughton kunye noSamuel Velasco weSizwe seJografi. (ngoSean McNaughton kunye noSamuel Velasco)
Disney nxamnye neMarvel. Isabelo sekholaji esenziwe yiCurseofthemoon. I-infographic malunga neDisney yokuthenga iMarvel. (Ngesiqalekiso seNyanga)
Grand Mosque. Olu lupapasho lwe-infographic oluvela kwiGulf News (eDubai). Kuze nomzobo kanye nenkcazo malunga nokwakhiwa kwe-mosque enkulu. (ngoDouglas Okasaki)
Unyukela phezulu. Kumazwe ali-191 abalwa liZizwe eziManyeneyo ngama-81 (42%) kuphela anesakhiwo esingaphezulu kwe-100 leemitha. (ngeTheo Deutinger, uJohannes Pointl, uBeatriz Ramo)
Imithombo yohlangulo kunye nokuGcinwa kweLwandle. I-BP ineenjongo zokomba amaqula amabini ayilelwe ukunqumla umthombo wamanzi ngaphezulu kwe-oyile. (ngeHollywoodbackstage)
Prism Imidiya yokuncokola ngo-2010. Le infographic ibonisa iincoko ezikwi-Intanethi phakathi kwabantu abahlala kuluntu kunye neenethiwekhi ezinxibelelana neWebhu yeNtlalontle. (ngoSerge Esteves)
Imfuza kunye noMbutho: Ukwenza ikhonkco. Olu lwazi lwe-infographic lunokukunceda ufunde ukwahlula phakathi kophando lobumbano kunye nolwazelelo ngokuzala. (nge-DNAPolicy)
Umzekelo womsebenzisi weFlickr. UBryce Glass uvelise imizobo emihle yomfanekiso womsebenzisi weFlickr apho umntu anokuyiqonda ngokulula i-Flickr ecosystem. (ngeBryce Glass)
Ukutsha kwePetroli: Umndilili weMoto vs. Umndilili woMntu. Ukuthelekiswa kwe-infographic ngendlela iimoto ezisebenzisa ngayo igesi ukuzenzela amandla, njengoko abantu besebenzisa ukutya. (nge Okulungileyo)
Khetha Isixhobo Sakho: Urhwebo lwehlabathi lweengalo. Inkcitho yomkhosi wehlabathi ngoku ifikelele kwisigidi esinye sezigidi zeedola. (ngePrinceton)
Ukuvuka okungcolileyo. Impembelelo yokuchitheka kweoyile kwindawo ye-Mexico (nge Infographicworld)
Ixesha leGeological Spiral. Umzobo wexesha lejoloji. (nge-Ethan Hein)
Uninzi lweencwadi ekujoliswe kuzo. Rhoqo ngonyaka, amathala eencwadi ayacelwa ukuba asuse iincwadi ezishelfini zabo, kuba kufunyaniswe ukuba azifanelekanga. Kodwa uluhlu lweencwadi ezili-10 ezinzima kakhulu ngo-2009 zibonisa ukuba zeziphi iincwadi abanye abazali abafumana zichasayo, kwaye kutheni bavakalelwa kukuba abantwana babo akufanele bafunde. (nge Okulungileyo)
Itape ebomvu: Urhulumente usile. Umndilili wemirholo karhulumente waseMelika kunye nezikhundla ezibonisiweyo (ngePrinceton)
Iprofayile yabasebenzisi be-Twitter. Iindidi ezahlukeneyo zabasebenzisi be-twitter (ngomboniso we-infographics)
Usale kakuhle, uLenin. Le infographic eyenziwe kakuhle yindawo yesi-2 ephumeleleyo kukhuphiswano lwamazwe aphesheya lokuYila amaphephandaba. (ngeLech Mazurczyk)
Iinqwelo moya zaseKulula. I-airline yase-Afrika uKulula iphinde ihlelwe ngokutsha. Benza enye ye-infographic enkulu ngaphandle kwe-aircrafts zabo. (nge Shanairpic)
I-CarLand: Inkulungwane yezoMoto eMelika. Imbali yemoto yaseMelika. (ngeGood)
Idabi lePlastikhi: Ityala leVs. Ukwahlukana phakathi kwekhadi ledebhithi kunye nekhadi letyala. (ngeMali mboleko kunye neKhredithi)
Izakhiwo ezide kakhulu. Nanku ukujonga kwezona zakhiwo zide emhlabeni. (ngeJoelertola)
IPyramidi yePiracy ye-Intanethi. I-MPAA ibonelela ngenkcazo ebonakalayo ngephiramidi yobuqhetseba kwi-Intanethi. (ngeNIXON * NGOKU)
Digg iphepha elingaphambili: infographic vs Non-infographic. Ukungeniswa kwe-digg edumileyo esebenzisa infographics ngokuchasene ne-infographics. (nge10e20)
Ezona Webhusayithi ziLayishe kancinci kwi-Fortune 500. Le infograph ineenkcukacha zamaxesha okulayisha azo zonke iinkampani zeFortune 500 (ngeHeinley)
I-cosmology yamandulo yamaHebhere. Umbono wamandulo wehebhere kwindalo iphela (ngo-Michæl Paukner)
Iphupha laseMelika. Le infographic ibonisa iphupha lokwenyani laseMelika (ngeSpidercam)
Itheyibhile yamaxesha athile ye-Intanethi. Itheyibhile yamaxesha eewebhusayithi ezidumileyo (ngeWellington Grey)
I-Rocket-Ubungqina be-Obamamobile. Umzekeliso osuswe nguJohn Lawson obonisa indlela anzima ngayo uCadillac One ka-Obama. (ngoJohn Lawson)
Ukuqwalaselwa kwesilwanyana sasekhaya: Iindleko zoMhle. Makhe sijonge kwiindleko zokwenyani zokukhulisa (kunye nokuthambisa) izilwanyana esizithandayo. (ngeMint)
Umhla we-D. Imbonakalo eneenkcukacha ngokwenzekayo kwi-D-Day (ngeMetrobest)
Iindleko zobunini. Iindleko eziqikelelweyo zokwakha indlu. (ngeDonkey Monkey)
Iikhosi zePikes Peak. Umzekeliso omhle wePikes Peak International Climb (ngeDavvi Chrzastek)
Akusekho Ntlanzi Elwandle. Le infographic ibonisa ukupheliswa okusondeleyo kobomi baselwandle kuya kuba sisiphumo sokunqongophala kweyantlukwano kwindalo yolwandle evela kwindlobo yokuloba kweentlobo ezithile zeentlanzi. (nge Okulungileyo)
Imibuzo eNkulu yoTshintsho lweMozulu. Impembelelo yokwenyani yotshintsho lwemozulu (ngeAdolfo Arranz)
I-inshurensi yomzimba wodumo. Uluhlu lwabantu abadumileyo kunye nenxalenye yomzimba abayiqinisekisileyo (ngeBlog yeProfographics)
Isiqingatha seglasi esingenanto: Iimfazwe zamanzi ezizayo. Le infographic ichaza ukuba kutheni kufuneka songe amanzi ngoku. (ngePrinceton)
Ixesha leBicentenary. Umzekeliso kunye noyilo lukaFernández Editores (nge-Icarograf)
Ifama yexesha elizayo. imbono ekrelekrele kulimo lwenkampani (ngePosterous)
Ukubulawa kwePuerto Hurraco. I-infographic eyenzelwe iSpain yeDemokhrasi (ngeJulian Develascot)
Kulapho sihlala khona. Jonga iMelika ngamanani kunye nale infographic esebenzayo. (ngeXesha)
Imephu ye-USA. Ukujonga imephu yase-USA (ngeMakemyMood)
AmaXesha amaTandathu e-ABC 'alahlekileyo' -Ngamanani. Izinto ezihlekisayo malunga nomdlalo kamabonwakude waseMelika osebenzayo. (ngeMediaFreakBlog)
Iphiramidi yeNkqubo yongxowankulu. U-Capitalist ucacisile kule infographic elula kodwa ebonakalayo. (ngeNEDELJKOVICH, BRASHICH kunye neKUMARICH)
Umda wexesha leBrick LEGO: Iminyaka engama-50 yoKwakha uFrenzy. LEGO, ukutyhubela iminyaka (ngoYesu Diaz)
Abantu vs Izilwanyana. Lo mboniso ubonakalisa umdla wokuba ezinye iimpawu zabantu zifunyenwe kwizilwanyana. (ngeMetrobest)
Ngamazwi. Uluhlu lwealfabhethi lwamagama aqhele ukwenzeka encwadini, ngaphandle kwamagama aqhelekileyo anje ngo "ka" no "wona." (nge Amun Levy)
Kutheni uFreeways eze ema. Le infographic epholileyo ibonelela ngezizathu ezi-4 zokuba kutheni oohola bendlela bema. (ngomboniso we-infographics)
Ipaki enkulu. I-infographic yoyilo ebonisa umfanekiso we-panda ngohlobo lokuchwetheza. (ngeLish-55)
I-Figurinhas da Copa. Uthotho lwemagazini ekhethekileyo yabadlali beenkwenkwezi abaya kwiNdebe yeHlabathi. (ngoRenata Steffen)
Uthutho lwesithathu lokugqibela. I-infographic malunga nonobangela weengozi zendlela (ngoGerson Mora)
Ibali (ukuza kuthi ga ngoku) kwi-Twitter. Ukunyuka kunye nokuvuka kwe-Twitter (nge-Infoshot)
Elona Shift likhulu. Ukucinga ukuba ezi zibalo zichanekile ngokufanelekileyo, zibonisa ukubaluleka kunye nobukhulu beendaba zosasazo. (ngeDerri Hasmi)
Ukuhla kweTyala leKhadi letyala. I-Mint.com inomdla, kodwa ifundisa, i-infographic malunga nokuba kulula kangakanani ukubethwa yityala lekhadi letyala. (ngeMint)
Funda ngokugqithisileyo: I-50 yeLwazi kunye neNgcaciso yeNgcaciso yeNdalo | Ukuphefumlelwa http://www.hongkiat.com/blog/50-informative-and-well-designed-infographics/#ixzz0pRoediHn
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » I-infographics eyi-50 eyilwe kakuhle
Inomdla kakhulu, ngokucacileyo ngumzekelo omkhulu kuthi kwaye sikwazi ukusebenza nabafundi bethu, enkosi, kulungile.
inika umdla kakhulu.
Iifigrafikhi ezintle. Ndandihlala ndicinga ukuba kufuneka ube neetalente ekhethekileyo ukuze ube yintatheli okanye umlobi wamaphephancwadi. Akululanga ukushwankathela idatha eninzi kwindawo encinci kwaye uyenze iqondakale kwaye kwangaxeshanye iyonwabisa kumfundi.
20 yezona mxholo zibalaseleyo ze-Ecommerce zeWordPress